ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : trader ဟိုတယ် ဗုံးကွဲမှုသတင်း 12:27am. အချိန် 15/10/2013
trader ဟိုတယ် ဗုံးကွဲမှုသတင်း 12:27am. အချိန် 15/10/2013
၅ ထပ် ကနေ လမ်းပေါ်ထိ မှန်စတွေပြန့် ကျဲကုန်တယ်ဆိုတော့ ဗုံးအား တော်တော်ပြင်းလို့ ပဲ
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ တွေ ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ထိခိုက်မှုမသိရသေး။
ဟိုတယ်ခန်းမှမှန်ကွဲစများ လမ်းမပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲ လျက်ရှိ။
မူရင်း Myat Kyaw